Induction Heat setting Nitino Ne High Frequency Heating
musha / Applications / Induction Heating / Induction Heat kumisikidza Nitinol
Category: Induction Heating Tags: kupisa kupisa nitinol, induction kupisa Nitinol, induction Nitinol hita, induction Nitinol kupisa, Nitinol kupisa induction system, Nitinol induction kupisa, kuruma Nitinol
Induction Heat iri kuisa Nitinol neHigh Frequency RF Induction Heating Equipment
Chinangwa Kupisa 0.005 "(0.13mm) dhayamita Nitinol waya yekushandisa kuiseta
Nyaya Nitinol wire
Kupisa 930 ° F (500 ° C)
Zvishandiso DW-UHF-6kW-I solid-state induction magetsi yakagadzirirwa neiri kure kupisa chiteshi ine maviri 0.33μF capacitors (yakazara 0.66μF). Iyo induction-yekupisa coil yakagadzirirwa uye kugadzirirwa zvakanangana neichi chishandiso.
Maitiro Chigadziro chinopihwa nevatengi chine maviri akanyatsogadziriswa masirinda: a 0.1 ”(2.54mm) gobvu rekunze rekunze rakatsvedza kupfuura 1" inch (25.4mm) dhayamita yakasimba silinda. Iyo inodiwa Nitinol chimiro inocherechedzwa pane iyo OD yemukati humburumbira. Iyo yakasimba simbi fixture yakapihwa inochinjiswa kudzikisa iyo inopisa
misa. Iyo yakasimba yemukati humburumbira yakabvarwa kubvumira kuti coil iiswe muID. Iyo yakakosha ina-shandura yemukati neyekunze helical coil inoshandiswa kuburitsa inodiwa kupisa pateni. Chekutanga bvunzo dzinoitiswa (uchishandisa thermocouple) pane chigadziro chisina chikamu chekumisikidza iyo yekudziya kutenderera. Chikamu chinoiswa mukati mekugadzika uye iyo induction-yekupisa coil pamusoro pechikamu. Simba rinopihwa kudzamara chikamu chapiswa kusvika panzvimbo yakatarwa uye inobatwa patembiricha iyi kwemaminetsi maviri nemashanu. Chigadziro chinobva chadzimwa mumvura zvichitevera kupisa kwacho. Zvikamu zvinogadzirwa kune zvakatemwa zvechimiro ndangariro.
Mhedzisiro / Bhenefiti Iyo Ameritherm sisitimu inopisa iyo yakatarwa kusvika kune yakatarwa poindi pamitengo yakatarwa uye iyo Nitinol waya inogadzirwa sezvaidiwa mukati memaminitsi mana, ichishandisa mashoma simba uye nguva kupfuura echinyakare hovhoni.
induction heat heat rolling
induction heat rivets
Induction Inopisa Muchuni Wechipfuva Kuti Uwane